4 Ụmụ Juda bụ Pirez,+ Hezrọn+ na Kamaị+ na Họọ+ na Shobal.+ 2 Ma Reeya+ nwa Shobal mụrụ Jehat; Jehat amụọ Ahumaị na Lehad. Ndị a bụ ezinụlọ dị iche iche nke ụmụ Zora.+ 3 Ndị a bụ ndị nna Itam+ mụrụ: Jezril+ na Ishma na Idbash, (aha nwanne ha nwaanyị bụkwa Hazelelponaị,) 4 nakwa Penuel nna Gidọ+ na Iza bụ́ nna Husha. Ndị a bụ ụmụ Họọ+ (ọkpara Efrata) bụ́ nna Betlehem.+ 5 Ash-họ+ nna Tekoa+ wee lụọ ụmụ nwaanyị abụọ, bụ́ Hila na Neara. 6 Ka oge na-aga, Neara mụụrụ ya Ahọzam na Hifa na Timenaị na Haahashtaraị. Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Neara. 7 Ụmụ Hila bụ Ziret, Izha na Etnan. 8 Ma Kọz mụrụ Enọb na Zọbiba nakwa ezinụlọ dị iche iche nke Ahahel nwa Herọm. 9 Jebez+ wee bụrụ onye a na-asọpụrụ+ karịa ụmụnne ya; ọ bụ nne ya gụrụ ya Jebez, sị: “M mụrụ ya n’ihe mgbu.”+ 10 Jebez wee malite ịkpọku Chineke+ Izrel, sị: “Ọ bụrụ nnọọ na ị ga-agọzi+ m ma mee ka ókèala m sakwuo mbara,+ ọ bụrụkwa na aka gị+ adịnyere m, gị echebekwa m n’ọdachi,+ ka ọ ghara imerụ m ahụ́,+—” Chineke wee meere ya ihe ọ rịọrọ.+ 11 Kilọb nwanne Shuha wee mụọ Miha, bụ́ nna Eshtọn. 12 Eshtọn amụọ Betrefa na Pasia na Tehina bụ́ nna Iye-nehash. Ọ bụ ndị a bụ ndị Rika. 13 Ụmụ Kinaz+ bụ Ọtniel+ na Seraya, ụmụ Ọtniel bụ Hetat. 14 Meonotaị wee mụọ Ọfra. Ma Seraya mụrụ Joab nna Ge-harashim; n’ihi na ha ghọrọ ndị omenkà.+ 15 Ụmụ Keleb+ nwa Jefọne+ bụ Aịru, Ila na Neem; ụmụ Ila bụ Kinaz. 16 Ụmụ Jehalelel bụ Zif na Zaịfa, Tiria na Asarel. 17 Ụmụ Ezra bụ Jita na Mired na Ife nakwa Jelọn; nwaanyị ahụ wee tụrụ ime Miriam na Shamaị na Ishba nna Eshtemoa.+ 18 Ma nwunye ya bụ́ onye Juu mụrụ Jired nna Gidọ na Hiba nna Soko nakwa Jekutiel nna Zanoa. Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Bitaya bụ́ ada Fero, onye Mired lụrụ. 19 Ụmụ nwunye Hodaya, nwanne Neham, bụ nna Kaịla+ onye Gerem nakwa Eshtemoa onye Meakat. 20 Ụmụ Shaịmọn bụ Amnọn na Rina, Ben-henan na Taịlọn. Ụmụ Ịshaị bụ Zohet na Ben-zohet. 21 Ụmụ Shila+ nwa Juda bụ Ea nna Lika nakwa Leada nna Marisha nakwa ezinụlọ dị iche iche nke ndị na-akpa ákwà ọma+ bụ́ ndị ụlọ Ashbia; 22 nakwa Jokim na ndị Koziba na Joash na Seraf, bụ́ ndị lụrụ ndị inyom Moab,+ nakwa Jashubi-lihem. Okwu ndị a bụ okwu oge ochie.+ 23 Ọ bụ ha bụ ndị ọkpụite+ biri na Neteyim nakwa Gedira. Ha biri n’ebe ahụ na-arụrụ eze ọrụ.+ 24 Ụmụ Simiọn bụ Nemuel+ na Jemin,+ Jerib, Zira, Sheọl,+ 25 Sheọl wee mụọ Shalọm, Shalọm amụọ Mibsam, Mibsam amụọ Mishma. 26 Mishma mụrụ Hamuel, Hamuel amụọ Zakọ, Zakọ amụọ Shimiaị. 27 Shimiaị mụrụ ụmụ nwoke iri na isii na ụmụ nwaanyị isii; ma ụmụnne ya amụghị ọtụtụ ụmụ, ọ dịghị onye ọ bụla n’ime ezinụlọ ha nke mụrụ ọtụtụ ụmụ ka ụmụ Juda.+ 28 Ha wee biri na Bia-shiba+ na Moleda+ na Heza-shual+ 29 nakwa na Bilha+ nakwa n’Izem+ nakwa na Tolad+ 30 nakwa na Betuel+ nakwa na Họma+ nakwa na Ziklag+ 31 nakwa na Bet-makabọt nakwa na Heza-susim+ nakwa na Bet-biraị nakwa na Shearem.+ Obodo ndị a bụ obodo ha ruo mgbe Devid chịrị. 32 Obodo nta ha bụkwa Itam na Eyin na Rimọn na Token na Eshan,+ obodo ise. 33 Obodo nta ha niile bụ́ ndị gbara obodo ukwu ndị a gburugburu dị ruo Bel.+ Ọ bụ ebe ndị a ka ha biri, ndị a bụkwa usoro ọmụmụ ha e debara n’akwụkwọ. 34 Tinyere Meshobab na Jamlek na Josha nwa Amazaya, 35 na Joel na Jihu nwa Joshibaya, nwa Seraya nwa Asiel, 36 Elio-inaị na Jaakoba na Jeshohaya na Asaya na Adiel na Jesimiel na Benaya, 37 na Zaịza nwa Shaịfaị, nwa Alọn, nwa Jedeya, nwa Shimraị, nwa Shemaya. 38 Ndị a aha ha batara bụ ndị isi n’ezinụlọ ha,+ ụlọ ndị nna nna ha mụbakwara nke ukwuu. 39 Ha wee gaa n’ụzọ e si abanye Gido, garuo n’ebe ọwụwa anyanwụ nke ndagwurugwu, ịga chọọ ebe ịta nri maka ìgwè ewu na atụrụ ha. 40 E mesịa, ha hụrụ ebe ịta nri dị mma nke jupụtara n’ahịhịa,+ ala ya sakwara nnọọ mbara, e nweghị nsogbu na ya+ kama udo dị na ya; n’ihi na ndị bi n’ebe ahụ n’oge mbụ bụ ụmụ Ham.+ 41 Ndị a e debara aha ha n’akwụkwọ wee bata n’ụbọchị Hezekaya+ eze Juda ma tikpọọ+ ụlọikwuu ụmụ Ham, gbuokwa ndị Meyunim bi n’ebe ahụ, ha wee bibie ha+ ruo taa; ha wee bichie ha, n’ihi na e nwere ebe ịta nri+ maka ìgwè ewu na atụrụ ha n’ebe ahụ. 42 Ụfọdụ n’ime ụmụ Simiọn si n’etiti ha gbagoo Ugwu Sia.+ Ha dị narị ndị ikom ise. Pelataya na Nearaya na Refeya na Ọziel, bụ́ ụmụ Ịshaị, bụkwa ndị isi ha. 43 Ha wee gbuo ndị fọdụrụ ná ndị Amalek+ bụ́ ndị gbapụrụ agbapụ. Ha wee biri n’ebe ahụ ruo taa.